Ntugharia: Ntughari akwukwo nke Google 5 | Martech Zone
Wenezdee, Machị 30, 2011 Tuzdee, Machị 29, 2011 Douglas Karr
Ndị enyi anyị karịa Uzo ahia kpughere ọmarịcha nlele nke nchịkọta Google ọzọ kachasị na Youtube. Ọ na-egosi na nke a bụ nnukwu nnwere onwe nke lekwasịrị anya na njikwa ọrụ, mana agbakwunyere atụmatụ ndị dị mkpa na akụkọ ọdịnala na dashboard.
Nke a bụ hụchalụ video si Justin Cutroni:
The ozi ọma na-adịghị eme ka dị ka nnukwu ikwommiri dị ka Nchịkọta Webtrends 10 ntọhapụ nwere, mana ọ bụ oke ozi ọma maka ndị ọrụ Google Analytics. M na ndị ahịa m na-agba ọsọ Google Analytics mgbe niile na ha nwere ike ịkwụ ụgwọ obere maka ikikere Webtrends site na oge anyị nwetara ihe niile na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị. 🙂
chaị ya ụda nke ukwuu .. olile anya na nke a nwere ike ịbụ